Multi-Vitamin: အင်မတန် ထူးဆန်းတဲ့ရောဂါ (PSAS) 18+
1 day 300 times OMG !
မီရှယ်လီသော်မဆမ် ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ တစ်ရက်ကို အကြိမ်ပေါင်း ၃ဝဝ လောက် လိင်ဆက်ဆံ လိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ (Persistent Sexual Arousal Syndrome) PSAS ဆိုတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးကိုခံစားနေရပါတယ်။ တချိန်တုန်းက ချစ်သူများကိုလည်း ထိုကဲ့သို့ သူ့စိတ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ သူ့အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အင်ဒရူးကာ (၃၂)နှစ်
ဆိုတဲ့လူနဲ့ရင်းနှီးနေတာ ၆ လလောက်ရှိပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ထိုသူဟာ သူ့ကဲ့သို့ စိတ်အားထက်သန် ဝါသနာကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်ကို ၁ဝ ကြိမ်ခန့် အချစ်ရည်လူး နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ မီရှယ် က ပြုံးရွှင်စွာဖြင့် အင်ဒရူးဟာ ကျွန်မဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါပြီ ကျွန်မရဲ့ဒီရောဂါကိုကုဖို့အတွက် အချိန်အကြာကြီးကုန်ခံပြီး ရှာနေစရာမလိုတော့ပါဘူး ကျွန်မအခု
အခုတော့ကျွန်မမျက်နှာမှာ အမြဲတမ်းပြုံးနိုင်ပါပြီ။ မီရှယ်ရဲ့ ဟာ ရောဂါကြောင့် အမြဲတမ်း အချိန်တိုင်း
နေရာတိုင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံဖို့ အထွဋ်အထိပ်မှာရှိနေပါတယ်။ မီရှယ်ရဲ့ ပထမ ချစ်သူတွေဟာ လအတော်ကြာပြီဆိုရင်တော့ သူမရဲ့တောင်းဆိုမှုကို မပြုလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘဲ ဆလမ်ပြပြီး ထွက်ပြေးရ
တော့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအထဲမှ တစ်ယောက်ကတော့ ငါကလူ စက်မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာရှာပြန်တော့လဲ သူ့အကြောင်းကိုနဲနဲပြောပြလိုက်တာနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ မီရှယ်က ကျွန်မအင်ဒရူးကို အရင်လူတွေလို ခြေကုန်လက်ပန်းကျ သွားမှာစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ကျွန်မသူ့ကို အဲ့လို အင်ဒရူးကိုပြောတဲ့အခါမှာ တော့ အင်ဒရူးက ရယ်မောလျှက် ကျွန်မကို သာအရင်ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားစေရမယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်။ အကယ်၍ အင်ဒရူးသာ တတ်နိုင်ရင် ကျွန်မကတော့ ၂၄ နာရီ အချိန်ပြည့် တတ်နိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ကျွန်မအတွက် လွယ်လင့်တကူဘဲ လမ်းကူးပြီး အင်ဒရူးအိမ်ကို သွားပြီး ဆက်ဆံ ကြပါတယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး ၁ဝကြိမ်လောက်တော့ရှိမယ် လို့ မီရှယ်က ပြောပြပါတယ်။ ကလေး ၄ ယောက် မိခင် မီရှယ်က ဆက်လက်ပြီး အခုကျွန်မဘဝလေးကို တကယ်ဘဲအရမ်းကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တတ်နိုင်ရင် အတူနေဖို့အတွက် လည်း အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ အင်ဒရူးလိုလူမျိုးကိုလိုက်ရှာတာ အချိန်တော်တော် ကြာခဲ့ပါပြီ။
အခုတော့ကျွန်မ နတ်ပြည် ရောက်နေသလိုခံစားနေရပါတယ်လို့ မီရှယ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ ဆာရာ ဖြစ်ပါတယ် သူမဟာ PSAS ရောဂါခံစားနေရတာဖြစ်ပြီး တစ်ရက်ကို အကြိမ် ၂ဝဝ လောက် လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by 925 at 04:51
ချောကလက်ကျူးပစ်လေး 15 January 2012 at 07:43
925 15 January 2012 at 16:49
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်) 15 January 2012 at 17:39
သတ္တဝါ တစ်ခု၊ ကံတစ်ခုရယ် နော်..
Anonymous 24 January 2012 at 04:55
ဒါညိုးနဲ့တွေ့လို့ကတော့ ထွက်ကိုပြေးမယ်(ဖိနပ်တောင်မကောက်ဘူးဟီးဟီး) နေမကောင်းပါဘူးဆိုဇွတ် :P
မေမြို့မိုး 29 January 2012 at 04:20
Anonymous 16 February 2012 at 02:41
Z@! 21 February 2012 at 23:19
အောင်မလေးဟ.. ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဒီလို ထူးဆန်းတဲ့ ရောဂါက ရှိရတာပါလိမ့်။ လူ စင်စစ်မှ ဟုတ်ပါလေစ..
aungaung 25 February 2012 at 23:28
paungchain 29 February 2012 at 03:36
ပေးတွေ့ချင်လိုက်တာ seamanတွေနဲ့ အရိုးတောင့်ကျန်မှာမှဟုတ်ဘူးးးဟီဟီး!!!!!!!!!
Anonymous 21 March 2012 at 10:04
hello 24 July 2012 at 07:31